सप्तरीमा मधेशी जनता जाइलागेपछी एमालेको नेताहरु भागाभाग::netpatrika
सप्तरीमा मधेशी जनता जाइलागेपछी एमालेको नेताहरु भागाभाग
सप्तरी । केपी ओली आउँदा ५ जनाले ज्यान गुमाएको सप्तरीमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको भागभाग भएको छ । प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डलसहित नेता कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा निस्किएका बेला मधेसी जनताले प्रतिकार गरेपछि एमालेहरुको भागाभाग भएको हो ।
प्रदेश नम्बर दुईमा आसोज २ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारका लागि प्रदेश संयोजक मण्डल बुधबार उम्मेदवारसहित नेता कार्यकर्ताका साथमा सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नं. ११ मा पुगेका थिए । त्यहाँ उनको गाडी देखेपछि एक्कासी मधेसी युवाहरुले रोकेर अवरोध गरे ।
एमालेका पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य समेत रहेका मण्डलको गाडी रोकेर हुलहुज्जत एवं तोडफोड गर्ने प्रयास गरियो । धन्न समयमै प्रहरी आएर सुरक्षित स्थानमा लग्यो । गाडीमा तोडफोड हुँदा अन्य नेता कार्यकर्ताको भागाभाग भएको थियो ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले मण्डलमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । उपप्रमुख सूर्य थापाले विज्ञप्ति निकालेर आक्रमण रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनका अनुसार सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नं. ४ का एमाले महिला सदस्य कुमारी देवी सदालाई बुधबार राती ८ः३० बजे कुटपिट गरिएको छ । त्यस्तै, एमाले तर्फका वडा सदस्यका उम्मेदवार भोलनाथ लेखीका छोरा एकनाथ लेखीलाई घाइते हुने गरी कुटपिट गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसरी एमाले मधेसीको निशानामा परेको छ ।